by ဒါး Meador
အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှုစမ်းသပ်မှု၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ စာသင်ခန်းဆရာ, ဆရာမများကအသုံးပြုသွားမည်အကဲဖြတ်၏လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံများ ။ သူတို့ကဆရာ, ဆရာမတည်ဆောက်ရန်အဘို့အလွယ်ကူသောဖြစ်ကြပြီးဂိုးသွင်း။ မျိုးစုံရွေးချယ်မှုစာမေးပွဲများကျွမ်းကျင်တဦးတည်းအကြောင်းအရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိမ္မာစမ်းသပ်ဆည်းပူးနေဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါမျိုးစုံရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုမဟာဗျူဟာများပါလိမ့်မယ် ကျောင်းသားများကိုကူညီ တဲ့မျိုးစုံရွေးချယ်မှုအကဲဖြတ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ရမှတ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ဤရွေ့ကားမဟာဗျူဟာကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့အဖြေကိုမှန်ကန်ဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
ကမျိုးစုံရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ပေါ်ဤအကြောင်းမဟာဗျူဟာအသီးအသီးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်အလေ့အထသင်တစ်ဦးဖြစ်စေမည်ဟုပြုလုပ်ခြင်း ပိုကောင်းစမ်းသပ် taker ။
သငျသညျအဖြေကိုကြည့်မတိုင်မီမေးခွန်းကအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ဖတ်ပါ။ ထို့နောက်နိမ့်ဆုံးနှစ်ခုအချိန်များတွင်အဖြေရွေးချယ်မှုဖတ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးခှနျးတစျခုအချိန်ပိုမို Re-ဖတ်ပါ။
သငျသညျမေးခွန်းများ၏ပင်စည်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖတ်နေချိန်မှာအမြဲတမ်းစာရွက်တစ်ရွက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်သင့်လက်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှတုံ့ပြန်မှုတက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ထို့နောက်ဖြစ်နိုင်သောအဖြေကိုကြည့်မှီ, ရွေးချယ်မှုများစမ်းသပ်အပေါ်ပေးထားသောဤနည်းကိုသင်ပယ်ပစ်ဒါမှမဟုတ်သင်လှည့်စားမည်မဟုတ်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်းအဖြေကိုအတူတက်လာ။
အရှိန်လျော့သည်! သင့်ရဲ့အဖြေကိုရွေးချယ်ရာတွင်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ထိုရွေးချယ်မှုဖတ်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအဖြေကိုမှန်ကန်ဟုမယူဆပါနဲ့။ ပထမဦးဆုံး fit စခွေငျးငှါအနေဖြင့်တစ်ဦးအဆုံးစွန်သောတပိုကောင်း, ပိုမှန်ကန်သောအဖြေဖြစ်မည်အကြောင်းကြောင့်၎င်း, အပေါငျးတို့သညျအခွားရွေးချယ်မှုဖတ်နေပြီးအောင်လုပ်ပါ။
အဘယ်သူမျှမနောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းပြစ်ဒဏ်လည်းမရှိလြှငျ, အမြဲတစ်ပညာတတ်မှန်းဆ ယူ. အဖြေကိုရွေးချယ်ပါ။ အဖြေတစ်ခုအလွတ်စွန့်ခွာဘူး။
ရွေးချယ်မှုများနှင့် "အထက်ပါ၏အဘယ်သူမျှမ" "အထက်ပါအားလုံးသည်" သငျသညျအခြို့သောဖြစ်ကြသည်လျှင်ထုတ်ပြန်ချက်များတွေထဲကဟုတ်မှန်သည် "အထက်ပါ၏အဘယ်သူမျှမ" ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ချက်များများထဲမှမှားယွင်းသောဖြစ်ကြသည်ဘူးထဲမှာ "အထက်ပါအားလုံးသည်ရှေးခယျြဘူး "။
သင်ကအနည်းဆုံးနှစ်ခုမှန်ကန်သောထုတ်ပြန်ချက်များကိုမြင်ရလျှင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုက "အထက်အားလုံး" နဲ့မေးခွန်းတစ်ခုအတွက်, ထို့နောက် "ဟုအထက်ပါအားလုံးသည်" မှန်ကန်သောအဖြေကိုရှေးခယျြမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
tone အရေးပါနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအပြုသဘောအဖြေကိုရှေးခယျြမှုအနှုတ်အဖြေကိုရှေးခယျြမှုအပေါ်မှန်ကန်သောဖြစ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။
Wordiness ကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့်, မှန်ကန်သောအဖြေကိုအများဆုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
တခြားအရာအားလုံးထက်ပျက်ကွက်လျှင်, တုန့်ပြန် (ခ) သို့မဟုတ် (ဂ) ကိုရွေးချယ်ပါ။ အတော်များများကသင်တန်းပို့ချစဉ်မှာကြောင့် distractors ကဝိုင်းလျှင်မှန်ကန်သောအဖြေပိုကောင်း "ဝှက်ထားသော" ကြောင်းခံစားရသည်။ တုန့်ပြန် (က) ပုံမှန်အားဖြင့်မှန်ကန်သောတဦးတည်းဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါလိုင်းများအတွင်းနေပါ။ သငျသညျအဖြေ #2ခဲတံနဲ့အတူဂရုတစိုက်သင့်လျော်သောပူဖောင်းဖြည့်ပြီဟုသေချာပါစေ။ အဘယ်သူမျှမသွေအမှတ်အသားများရှိပါတယ်သေချာပါစေ။
အဖြေစာရွက်၌သင်တို့လက်ရှေ့၌သင်တို့အလုပ်စစျဆေးဖို့အချိန်ကိုယူပါ။ အချိန်စမ်းသပ်မှုတွင်သင်တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့အဖြေကိုရွေးချယ်မှုကူးဖို့ရှိသည်ထိုကာလ၌ရှိသမျှသောဒုတိယအသုံးချရန်။ တစ်ဦးအချိန်အခါမဟုတ်စမ်းသပ်မှုတွင်, အရာအားလုံးကိုကျော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစစ်ဆေးပါ။
လူမှုရေးလုပ်ငန်း (MSW) Programs ကို၏ထိပ်တန်းမာစတာ
Louisa မေလ Alcott
1997 WWE PPV အတွက်ရလဒ်များ
C. Wright Mills က၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ကမ်းရိုးတန်းကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
2009 ဆူဇူကီး TU250X ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အီသနော, Methanol နှင့် Isopropyl အရက်၏ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်များ
သင့်ကလေးငယ်နှင့်အတူ Canoe ဖို့ဒါဟာကို Safe ဖြစ်သနည်း
သင်ကလက်စွဲစာအုပ်ဂီယာအတွက် ATF ကိုသုံးပါနိုင်သလား?
Kennedy - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
သင့်ရဲ့ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အစောပိုင်း Buy3အကြောင်းရင်းများ
ဘယ်လို '' အီးယူ '' ပြင်သစ်အသံထွက်သလား